Nhau - Chii chinonzi karaoke？
Zita rekaraoke rinobva mumazwi echiJapan "zvisina maturo" uye "orchestra". Zvichienderana nezviri kutaurwa, karaoke inogona kureva mhando yenzvimbo yekuvaraidza, kuimba kuimba yekudzokera shure, uye chishandiso chekuburitsa kumashure kumashure. Hazvina mhosva mamiriro ezvinhu, isu tinogara tichifungidzira maikorofoni, mwenje wakajeka wescreen ine subs, uye yemafaro mamiriro. Saka, chii chinonzi karaoke?
Iko hakuna chaiyo mhinduro kumubvunzo wekuti karaoke yakatanga kubuda riini. Kana isu tikataura nezvekuimba kumimhanzi isina mazwi, saka kutanga kuma1930, kwaive nemarekodhi evinyl nemashure, akagadzirirwa kuitirwa kumba. Kana tikataura nezve karaoke player, ndiyo prototype yakatanga kugadzirwa muJapan mukutanga kwema1970 nemashiripiti kubata kwemuimbi Daisuke Inoue, uyo akashandisa mabhureki panguva yemitambo yake kuti azorore nekukurumidza achichengetedza danho rekutorwa kwevateereri.
MaJapan akakura kwazvo kuimba kuimba dzekumashure zvekuti munguva pfupi yapfuura, indasitiri nyowani yekugadzira karaoke-michina yemabhawa uye makirabhu yakaonekwa. Mukutanga kwema1980, karaoke yakayambuka gungwa ikamhara muUSA. Kutanga, yakapihwa fudzi rinotonhora, asi mushure mekugadzirwa kwevatambi vekaraoke vekumba, yakave yakakurumbira. Chinyorwa "Karaoke Evolution" ichakupa rumwe ruzivo nezve nhoroondo yekaraoke.
Izwi remuimbi rakafamba kuburikidza nemakrofoni kuenda kubhodhi rekusanganisa, uko kwaakasanganisa ndokuisa kumashure. Mushure meizvozvo, yakafambiswa pamwe chete nemumhanzi kune yekunze odhiyo system. Vatambi vaiverenga subs kubva paTV screen. Nechekumashure, vhidhiyo yemimhanzi yekutanga kana zvakanyatsoburitswa vhidhiyo ine zvemukati zvemukati zvakaridzwa
Miracast Ratidza, Wireless Microphone Karaoke, Karaoke Inotakurika Microphone, Imba Mashiripiti Karaoke Player,